Maamulaha Borussia Dortmund Oo Ka Hadlay Mustaqbalka Erling Braut Haaland Iyadoo Ay Jirto Wadahadalka Manchester City
HomeWararka CiyaarahaMaamulaha Borussia Dortmund oo ka hadlay mustaqbalka Erling Braut Haaland iyadoo ay jirto wadahadalka Manchester City
March 31, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Maamulaha Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke ayaa ku adkeystay in kooxdu ay “heli doonto xirfad kale” haddii Erling Braut Haaland uu baxo inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Haaland ayaa qandaraaskiisa BVB ku heli doonta 67 milyan ginni oo lagu burburin karo qandaraaskiisa xagaagan, waxaana si weyn loo filayaa inuu u dhaqaaqo, iyadoo Manchester City la sheegay inay tahay kuwa ugu horeeyo Safka saxiixiisa.
Watzke ayaa ku adkeystay in aysan wali jirin qaab uu u wajahay xiddiga heerka caalami ee dalka Norway, kaasoo dhaliyay 80 gool islamarkaana loo diiwaan geliyay 21 caawin 82 kulan oo uu u saftay Dortmund tartamada oo dhan.
Si kastaba ha ahaatee, madaxa kooxda Jarmalka ayaa sheegay in kooxda ay awoodaan inay la tacaalaan ka bixitaanka 21 jirka ee suuqa soo socda.
“Waan ka quustay in aan Xakameeyo wararka xanta ah ee warbaahinta. Haddii kale, maalintaydu waxay noqon doontaa 36 saacadood,” Watzke ayaa u sheegay Bild . “Hadda kama ogin wax gaar ah oo ka socda dhanka ciyaaryahanada, mana jirto cid nagala soo xidhiidhay